क्यान्सर ! आत्तिनु पर्दैन निको हुन्छ – Aajako Khabar: आजै अनि ताजै
काठमाडौँ, २१ वैशाख, २०७६ । क्यान्सर लागेपछि निकाे हुँदैन भन्ने धेरैकाे बुझाई छ । तर हाेइन, समयमै राेगकाे पहिचान गरी उपचार सुरु गर्न सके क्यान्सर निकाे हुन्छ । यस्ता धेरै उदाहरण छन्, जाे निरन्तरकाे उपचारपछि क्यान्सर निकाे भइ सामान्य जीवनमा फर्किएका छन् ।
झापा दमककी अबिसा ओली चार वर्षकाे हुँदा ब्लड क्यान्सर भएकाे थियाे । उनकाे क्यान्सर पहिलाे चरणमै भएकाले २ वर्षकाे उपचारपछि निकाे भयाे र उनी अहिले सामान्य जीवन बिताइरहेकी छिन् । उनकी अभिभावक निता ओली भन्छिन्, ”छाेरी दुई चार वर्षकाे हुँदा क्यान्सर भएकाे थाहा भयाे । हामी सबैकाे हाेस् नै उड्याे अब के गर्ने छाेरी मर्छे भन्ने डर मात्र मनमा थियाे ।” निरन्तरकाे उपचारपछि क्यान्सर निकाे भएको उनले बताइन् । उनी भन्छिन्, ”हामीले दुई वर्षसम्म छाेरीकाे उपचार गर्याै अहिले उसकाे क्यान्सर निकाे भइसकेकाे छ ।”
बझाङका दिपक थापाकाे छाेरालाई पनि ब्लड क्यान्सर भएकाे थियाे । १३ महिनाकाे उमेरमै छाेरालाई क्यान्सर भएकाे र त्याे पनि अन्तिम चरणमा हुँदा उनले हिम्मत हारिसकेका थिए । तर निरन्तरकाे उपचारपछि उनकाे छाेराकाे क्यान्सर निकाे भइसकेकाे छ । उनी भन्छन्, ”छाेरालाई क्यान्सर भएकाे थाहा हुँदा त मैले पुरा हिम्मत नै हारिसकेकाे थिएँ । हामीले जसाेतसाे उपचार गर्याै सबैकाे साथले छाेराकाे क्यान्सर निकाे भइसकेकाे छ ।”
नेपालका कति बालबालिका क्यान्सरबाट प्रभावित छन् भन्ने यकिन तथ्यांक नभए पनि १० लाख बालबालिकामध्ये १ सय २० जनामा क्यान्सर हुने सम्भावना रहेकाे बालबालिका क्यान्सर राेग विशेषज्ञ डा. प्रकाशनिधि तिवारी बताउँछन् । उनका अनुसार बालबालिकामा स्नायु प्रणाली, कलेजाे, मृगाैला लगायतकाे क्यान्सर देखिए पनि सबैभन्दा धेरै ब्लड क्यान्सरले सताउँछ ।
अन्य व्यक्तिकाे तुलनामा बालबालिकामा देखिने क्यान्सर राेग निकाे हुने सम्भावना ८० प्रतिशत बढी हुन्छ । तर अभिभावकले समयमै पहिचान गरी उपचारमा ल्याउनुपर्ने उनले बताए । उनी भन्छन्, ”बालबालिकामा सबैभन्दा धेरै देखिने क्यान्सर ब्लड क्यान्सर हाे । तर छिटाे पहिचान गरी उपचारमा ल्याउन सके निकाे हुने सम्भावना धेरै हुन्छ ।”
क्यान्सर भए/नभए पहिचान गर्न सकिन्छ । यदी दुई हप्ता भन्दा बढी ज्वराे आएमा, बच्चा शिथिल भएमा, शरीर सेता हुँदै गएमा, शरीरमा नीलाे डाम तथा राताे दाग आएमा, आँखामा सेता दाग देखिएमा, बालबालिका हिड्दा लड्खडाउँदै हिडे भने चिकित्सकसँग परामर्श गर्नुपर्छ ।
क्यान्सर निकाे भइसकेका बालबालिका नियमित चिकित्सककाे सम्पर्कमा रहनुपर्छ । हेलचेक्रयाइ गरे भविष्यमा क्यान्सर पुन: दाेहाेरिन सक्ने तथा अन्य राेगकाे जाेखिम रहने डा. तिवारीले बताए । उनी भन्छन्, ”क्यान्सर निकाे भए पनि नियमित जाँच गराउनुपर्छ । किनभने याे भविष्यमा फेरि दाेहाेरिने वा अन्य राेग निम्तने खतरा हुन्छ । त्यसैले यसकाे फलाेअप अत्यन्त जरुरी छ ।”
फायल तस्विरः रक्त क्यान्सरबाट पीडित बालिका उर्वसी केसी, खर्च अभावमा उपचारमा समस्या भएपछि उनले सहयोगको याचना गरेकी छिन् ।
प्रकाशित मिति: 2019-05-04 , संवाददाता: आजको खबर
Tagged उपचार क्यान्सर बालबालिका
गौरबाट एक किलो सुनसहित साह पक्राउ
प्रदेशसभा सदस्य उत्तरकुमार वलीको निधन
Tags: उपचार, क्यान्सर, बालबालिका